प्रियंका आमा बन्ने दिन नजिकिएका बेला किन प्रियंकासँग रिसाए आयुष्मान देशराज जोशी ? हेर्नुहोस भिडियो – Khabar28media
प्रियंका आमा बन्ने दिन नजिकिएका बेला किन प्रियंकासँग रिसाए आयुष्मान देशराज जोशी ? हेर्नुहोस भिडियो
प्रियंका आमा बन्ने दिन नजिकिएका बेला किन प्रियंकासँग रिसाए आयुष्मान देशराज जोशी ?
प्रियंका आमा बन्ने दिन नजिकिएका बेला किन प्रियंकासँग रिसाए आयुष्मान देशराज जोशी ? गर्भवती पत्निको ख्याल गर्न छाडेर किन यसो गरे प्रियंकालाई ?
अलटाइम हाइ प्रतिरोध विन्दु परीक्षण गरि फर्कियो नेप्से : साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्सेले अलटाइम हाइ प्रतिरोध विन्दु परीक्षण गरेर फर्केको छ। नेप्सेको हालसम्मको उच्च क्लोजिङ्ग विन्दु ३०२५.८३ हो। यस दिन बजार खुलेको पहिलो एक घण्टामा नेप्सेले सो प्रतिरोध विन्दुलाई परीक्षण गरी फर्किएको हो।
यस दिन इन्ट्रा डेमा नेप्से ३०३२ विन्दुसम्म पुगेको थियो। सोमबार नेप्से परिसूचक १३.९७ अंक बढेर २९९४.५८ विन्दुमा पुगेको छ। यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.०२ अंक घटेर ५६०.९४ विन्दुमा पुगेको हो। यता, यस दिन फ्लोट इण्डेक्स ०.८३ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.११ अंक बढेको छ।
नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार भएको छ। आइतबार ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको बजारमा यस दिन २१९ कम्पनीको १ लाख ७ हजार ७९७ पटकको कारोबारमा ११ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ७५ लाख ७१ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।
यस दिन सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सो कम्पनीको शेयरमूल्य यस दिन १० प्रतिशत बढेर ५१४ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ।
त्यसैगरी, यस दिन विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य ९.२० प्रतिशत बढेको छ। यस दिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सनराइज बैंकको ऋणपत्रको मूल्य ५ प्रतिशत घटेको छ। कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये ८ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी ५ उपसमूहको परिसूचक यस दिन घटेको छ।
यस दिन व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ५.२२ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, लगानी उपसमूहको परिसूचक १.४७ प्रतिशत बढेको छ। यस दिन फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १.१७ प्रतिशत घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन एनआईसी एशिया बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
सो बैंकको यस दिन ३५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। त्यसैगरी, यस दिन नबिल बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर ३० करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ।
Previous Article पति राज पक्राउ परेसंगै शिल्पा शेट्टी पनि पक्राउ पर्दै, के लाग्यो उनलाई आरोप ?
Next Article अन्त:त बिनिता कुमालको आमा मिडियामा आईन? रु दै यस्तो सम्म भनिन बिनितालाई हेर्नुस ! (भिडियो सहित)